Gbasara Anyị - Fujian Nuomigao Medical Technology Co., Ltd.
Ihe ngbochu ogwu
Kpoo Nkpuchi Nchebe (KN95)
Nkpuchi Echekwa (FFP2)
Ibepu umu nkpuchi
Ihe nkpuchi nchebe nwere ike iwepu
"Zute ihe ndị ahịa chọrọ ma gafere atụmanya ndị ahịa"
Fujian Nuomigao Medical Technology Co., Ltd bụ onye nrụpụta ọkachamara nke nlekọta ahụike na masks ahụike, na-etu ọnụ maka agụmakwụkwọ ọkọlọtọ ọgbara ọhụrụ, akụrụngwa mmepụta ihe dị elu gụnyere igwe eji emebe ihe akpukpo akpaka, igwe mkpuchi akpaka KN95.
Ejiri ụlọ ọrụ ahụ na asambodo ndenye ọgwụ, Medical CE, asambodo FDA. Afọ ojuju onye ahịa bụ ebumnuche anyị ma jiri njikwa siri ike, nkwalite na izuzu na-azụlite azụmaahịa anyị.
Companylọ ọrụ ahụ ejirila usoro nhazi zuru oke na nnukwu ahịa na netwọrụ ọrụ, wee guzobe ezigbo mmekọrịta na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Anyị ọkachamara na njikwa nke akụrụngwa nchebe nke ụlọ na nke mba ọzọ. Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nchịkwa nke "iguzosi ike n'ezi ihe, nnabata nkwekọrịta na njikwa dị mma", ma na-enye ọtụtụ puku ngwaahịa na ụzọ edozi ahaziri ndị ahịa ya. Ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nchekwa ngwa ahịa zuru oke, nke zuru oke na nke ọkachamara na daquanzhou, na-enye gị nchekwa nchebe na ọrụ dị elu. Dabere na mkpa gị ahaziri iche, anyị ga-enye gị ọrụ nyocha ọrụ ọkachamara, ma chepụta usoro nchekwa na nchekwa ahụike yana Pọtụfoliyo nke ngwaahịa na-egbo mkpa gị maka gị na nzukọ gị.
Ihe anyị na-enye gị abụghị naanị ngwaahịa, kamakwa ihe ngwọta dị elu na ọrụ ngwaahịa! Anyị ga-aga n'ihu na-ekwenye n'echiche ọrụ nke "mezuo ihe ndị ahịa chọrọ, gafere ihe ndị ahịa chọrọ", ma nye gị ngwaahịa na ọrụ dị elu. Anyị ji obi anyị niile na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ!
Tẹ: 0086 18616356189